no kasain’ny zandarimariam-pirenena any an-toerana hotrongisina rahampitso zoma, alana tanteraka amin’ny toerany. Nisantaran’ireo zandary ny asa ny famefena ny lalana miditra ao amin’ity tanàna ity izay nambaran-dRtoa Vavy Eline, vadina tantsambo sady tompony fa tsy nisy didim-pitsarana akory. Raha tsiahivina, efa tamin’ny taona 2018 no nila vaniny tamin’ity renim-pianakaviana ity ireo zandary ao Toamasina noho ny filazan’izy ireo fa azy ny tany. Raha araka ny fanazavan-dRtoa Vavy Eline indray anefa dia azy ny tany, efa 17 taona izao raha kely no nanajariany ilay toerana, ananany taratasy ara-dalàna, misy titra amin’ny anarany ary vita baorina. Ny loza anefa, hoy izy dia ny vato baorina fito amin’ireo valo napetraky ny tompon’andraikitra misahana izany ao amin’ny villa Linah Toamasina dia efa nalan’ireo zandary ireo avokoa. Miantso ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard ity vehivavy ity hijery akaiky izao ady tany hifanaovany amin’ny zandary ao Toamasina izao. Nomarihiny manokana moa fa nikasa hanararaotra ara-nofo azy ireo zandary ireo saingy rehefa nanda izy noho ny fitiavany ny tokantranony dia nivadika ho zavatra hafa.